Hidhattoonni IS Somaaliyaatti lammiilee Itoophiyaa sadii ajjeessan - BBC News Afaan Oromoo
Biyya Somaaliyaa Puntiilaand magaalaa daldalaa kan taatee Bosaasootti lammiilee Itoophiyaa sadii hidhattoota gareen mootummaa Islaamaa (IS)n yoo ajjeefaman tokko madaa'un barame.
Miidhaa kana ilaalchisuun gabaasaaleen duraan bahan akka mullisanitti, hidhattoonni kunneenis bakka baqattoonni itti baayyatu jedhamu Saantoos keessatti lammiilee Itoophiyaa afur argatan irratti dhukaasa banuun miidhaa kana qaqqabsiisan.
Qondaalli naannichaa maqaasaanii hin eeriin tokko akka dubbataniittis, lammiilee Itoophiyaa kunneen irra miidhaan irra gahee du'usanii kan mirkanneessan yoo ta'u, gareen deeggaraa IS jedhamuus ergaa Tiwitariin waa'ee miidhaa kanaa barreesseera.
Baqattoonnii fi godaantoonni Itoophiyaa fi biyyoota Afriikaa biraa irraa bidiruuwwan xixiqqoon galaana qaxxaamuruun karaa seeraan alaatiin gara Yamanii fi biyyoota Gidduugala Bahaa (Middle East) cee'uuf barbaadan karra galaanaa Bosaasootti fayyadamu.
Naannichattis godaantoonni Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman akka argaman himama.
Lammiileen Itoophiyaa miidhaa kanaan ajjeefamaniifi miidhamanii karaa namoota seeraan alaa daddabarsaniitiin, ce'uun gara biyya Yaman kan waraanaan jeeqamaa jirtuutti qaxxaamuruuf achitti kan argaman akka ta'an tilmaamama.
Gareen Islaamaa kunis dhiheenya kana keessa miidhaawwan garaa garaa Somaaliyaa keessatti qaqqabsiisaa kan jiru yoo ta'u, keessattuu bulchiinsa Puuntiilaand keessatti bakkeewwan kaan caalaa gareen IS sochii taasisaa jira jedhamee amanama.
Puntilaandii lafa kaaba Somaaliyaatti argamtuufi bulchiinsa ofiin ofi bulchituudha.
Atileeti waggoota 38 booda warqii argatten walbaraa